Kuwana iyo chaiyo laptop inosangana nezvose zvaunoda uye bhajeti harisi basa riri nyore mazuva ano, sezvo uchifanira kusarudza pakati pezvizhinji zvezvakanaka sarudzo. Ini ndinogona kubatsira zvakadaro. Ndanga ndichishandisa malaptop e-ultra-portable uye ma-ultrabooks kweanopfuura makore gumi ikozvino uye ndaongorora mazana emamodeli panguva ino, izvo zvinondikodzera mukupa matipi uye mazano kana zvasvika pakusarudza chishandiso chakadai.
Usati watanga kutsvaga kwako kwe "holy grail" iwe uchafanirwa kuzvipindura pachako mashoma mashoma anokurumidza mibvunzo, se "Chii chandinoda kabhuku kanotakurika?", "Ndoda kushandisa marii?", "Ndiri kuda kabhuku kane saizi yakazara kana kuti ndoda kuva necompact ultrabook?", "Ndiri kuda touchscreen ? "," Ndiri kuronga kutamba chero mitambo? " kana "Chii chakanyanya kundinakira palaptop: dhizaini, iyo mhando yekuvaka, skrini, keyboard, pamwe chimwe chinhu chakatarwa?". Izvi zvinobatsira kudzikisira sarudzo dzako.
Kuve nemhinduro, unogona kuenderera uchiverenga chinyorwa ichi chakareba, icho chinopa zvandinokurudzira zvichibva pane zvaunogona kupindura kumibvunzo iri pamusoro. Pane inokurumidza Tafura Mukati pazasi iyo ichakubatsira iwe kutanga. Ini ndakachengeta zvinhu zviri nyore sezvinobvira, ndichingopa 3-4 mazano mune yega yega chikamu, asi iwe unowana zvinongedzo kune zvakadzama zvinyorwa pane yega yega subtopic, kana iwe uchifarira muhupamhi hwakawanda sarudzo.
Chinyorwa ichi chinowanzo gadziridzwa, sezvo ini ndichiwedzera nyowani ultraportable uye kurega izvo izvo zvapera kushanda. Pamusoro peizvozvo, kana iwe uchida kutungamirwa kwakawanda kana uine chero mibvunzo, pane chikamu chemashoko kumagumo epositi kwaunogona kusangana neni, ndinopindura kumashoko ese.
Tafura yezvinyorwa - yakanakisa 2017 ultrabook
Ichi chinyorwa chakakamurwa muzvikamu zvinotevera:
yakanakisa 2-in-1 ultraportables - convertibles kana detachable;
akanakisa echinyakare ultraportables - echinyakare makomputa ane clamshell fomu-chinhu;
anotakurika malaptop emitambo uye anonetsa mabasa - sarudzo dzevatambi, mainjiniya, graphic muimbi, programmers;
ese-akatenderera (multimedia) matete uye akareruka mabhuku;
inotakurika ine anoshanda digitizer uye peni rutsigiro;
anokwanisika malaptops pasi pe $ 500;
sarudzo dzakanakisa zvichienderana nesaizi screen.
Kunze kweizvi, iwe unowana yakadzama rondedzero yezvose zviripo Skylake ultraportable pamusoro apa, imwe yei zvisinganzwisisike ultrabooks mune ino chinyorwa (mazhinji ari pasi pe2.5 lbs, mamwe ari pasi pe2 lbs), runyorwa rwe ultraportable ine kana imwechete Thunderbolt 3 chiteshi pamusoro apa, runyorwa rwe bhizinesi ultrabooks ane 3G / 4G modems uye imwe ye ultrabooks ane Optical zvikamu pano.
Kugumisira asi kusiri kupedzisira, wongororo dzedu dzese dzinowanikwa mune yakatsaurwa chikamu, uye kwedu kuenzanisa uye misoro-ons mune ino chikamu.
Iwo akanakisa 2-in-1 anotendeuka
Mahybridi michina inogona kushandiswa seyemabhuku ezvinyorwa, semapiritsi, kana mune dzimwe nzira shoma dziri-pakati peavo. Zvese zvinopa chekubata-skrini uye izvo zvakanaka zvinonyanya kuwanikwa mune maviri mafomu maficha, kungave kabhuku kane 360-degree inoshandurwa kuratidzwa kana piritsi ine yakanamatira keyboard folios kana madoko. Iwe unowana angu ekurudziro epamusoro pazasi, uye iwe unogona zvakare verenga yangu yakazara gwara pane 2-mu-1 ultrabooks pamusoro apa.
HP Specter x360 - yakanakisa isingachinjiki
Yangu yekutanga kutora yekutanga 2-in-1 ndeye HP Specter x360 13-inch, sezvo iyi ichiwana akanakisa maficha uye mushandisi ongororo kubva kune vanokwikwidza zita racho (iyo Samsung ATIV Book 9 Spin, Asus Zenbook UX360UA kana Lenovo Yoga 900/910 ndiwo mamwe emakwikwi makuru).
update: Kubva mukupera kwa2016 pane vhezheni itsva yeHP Specter x360 inowanikwa, iine muviri wakaumbana uye wakareruka, Intel Kaby Lake Hardware uye maviri maThunderbolt 3 madoko, uye iwe unogona verenga zvese nezvazvo mune yedu yakadzama ongororo. Spoiler yambiro: yakanaka 13-incher, asi haichapi digitizer uye peni rutsigiro senge yapfuura vhezheni. Inotanga pamadhora gumi nemazana mashanu ekugadzirisa kwakanaka. Tevera uku kubatanidza kune mamwe mashoko.
Iyo Specter x360 inouya pamusoro nekuti haina chero hukuru hukuru. Hongu, inorema zvishoma (3.2 lbs) uye haina chiteshi cheThunderbolt 3, asi zvikasadaro haumbowane chero chekunyunyuta nezvazvo. Iyo yekuvaka mhando iri pamusoro-notch, iyo aesthetics haina chainopomerwa, kunyanya paAsh Copper musiyano, iyo 13-inch yepamusoro-resolution skrini yakanaka uye inosanganisira anoshanda digitizer uye peni rutsigiro, iyo keyboard uye trackpad zvakanyatsonaka, hardware mukati Intel Skylake Core U chikuva chinosvika ku8 GB ye RAM uye NVMe yekuchengetedza, uye iyo 55 Wh bhatiri inokwana kuchengetedza izvi zvichimhanya kwema7-10 maawa pacharge.
Nezve iyo Hardware, HP haina kupa iyo Specter x360 ine 16 GB ye RAM panguva ino yekuvandudza, iyo inogona kuve yekubata-kutyora vamwe. Zvakare, zvinongoshongedza zvigadziriso neMM2 SATA SSDs, asi izvo zvinogona kutsiviwa nePCIe kana NVMe madhiraivhi anoenderana.
Zvimwe zvakawanda paHP Specter x360 zviripo mukudzokorora kwedu kwakadzama.
Iyo 13-inch Specter x360 inotanga panosvika madhora mazana masere, nepo yakanaka gadziriso neCore i800 CPU, 5 GB ye RAM uye 8 GB yekuchengetedza inoenda pasi pe $ 256. Iwe unogona kunyange kutora iyo Core i1000 processor mune iyi bhajeti kana iwe ukavhima pasi madhiri, tevera iyi link kune rumwe ruzivo uye zvinogona kutapudzwa.
Dzazvino madhiri pane iyo HP Specter x360 13
Iyo HP Specter x360 ndiyo yakanakisa premium 2-in-1 kunze uko
HP inopawo a yakakura kusiana kweSpecter x360, iine 15.6-inch QHD kana UHD kuratidza. Uyu unogovana hunhu hwakawanda neiyo 13-inch modhi, asi inorongedza yakakura 64.5 Wh bhatiri, seti yematauri mana akatenderedza keyboard uye achisundidzira kurira kumusoro, inorema (4.1 lbs) uye inodhura, iine yepakati-nhanho kumisikidza kuenda kwemadhora mazana matatu nemazana masere.
azvino madhiri pane iyo HP Specter x360 15t
Iyo HP Specter X360s inowanikwa iine chero 13.3 kana 15.6 inch inoratidzira
Asus Zenbook UX360CA - yakanakisa 2-in-1 yeavhareji vatengi
Kana iwe uchida yakapfava 2-in-1 Laptop yekushandisa zuva nezuva uye usina $ 1000 yekushandisa paSpecter X360, iyi Zenbook inofanira kunge iri pane yako runyorwa.
Inowana chivakwa chesimbi, chakaonda uye chakareruka (2.9 lbs), inorongedza yakanaka skrini, keyboard uye inokwanisa Hardware. Nekudaro, iyo keyboard haina backlighning uye iyo hardware ndeyeIntel Core M chikuva, zvinoreva kuti haina fan uye ichazongo mhanyisa zvakakwana zviito zvisina kujairika uye mabasa ezuva nezuva senge kubhurawuza, kuona mabhaisikopo, kuteerera mimhanzi, kugadzirisa zvinyorwa, nezvimwe. , inoda software uye mitambo kune rimwe divi hachisi chinhu chino chakwanisa kubvaruka.
Chero bedzi iwe wakanaka nezvakadai zveCore M Hardware uye isina-backlit keyboard, ipapo Zenbook UX360CA chimwe chinhu chekufunga nezvacho Iyo Core m3 yekumisikidza ine 8 GB ye RAM uye 512 GB yeSSD yekuchengetedza inotengesa madhora mazana masere, nepo mavhezheni ane madiki 800 GB SSD achienda ne $ 256, asi haawanikwe zvakanyanya. Tevedza chinongedzo chinodzvova kuti uwane rumwe ruzivo uye zvingangove zviripo, uye iyi yekuongorora kwedu kwakadzama kweZenbook Flip UX360CA.
azvino madhiri paAsus Zenbook Flip UX360CA
Iyo Zenbook Flip UX360CA yakasviba, haina fan uye ine yakanakisa mutengo teki kune izvo zvauri kuwana
Kubva pakupera kwa2016 kune zvakare Zenbook Flip UX360CAK yekufunga, yakafanana neCA, asi neKaby Lake Core M Hardware.
Microsoft Surface Book - rakazara kwazvo remasanganiswa
Bhuku reSurface rinodaidzwa kunzi "remasanganiswa ekupedzisira" nenzvimbo dzakawanda dzakamisikidzwa uye ini pachangu ndinozviona semusanganiswa wakazara kunze uko, asi ingori zano kune avo vane bhajeti risingaperi, sezvo richigona kuita kuti TERRIBLY inodhura.
update: Kubva mukupera kwa2016 pane zvakare yakagadziridzwa vhezheni yeSurface Book, ine beefier mifananidzo (Nvidia GTX 965M), processor nyowani nebheteri rakakura. Inotanga pa $ 2399 uye tichagadzirisa chikamu ichi kana tangowana nguva yakawanda nacho. Parizvino, zvinotevera zvinotaura nezve yapfuura Surface Book vhezheni.
Bhuku reSurface rinowanikwa, piritsi rine 13.5-inch screen uye Intel Skylake Core U Hardware. Iyo piritsi chikamu chakatetepa uye chakareruka (1.6 lbs), tora iri 13.5-inch 3: 2 yakakwira-resolution touchscreen ine rutsigiro rwepeni, uye tucks processor, ndangariro, kuchengetedza uye bhatiri diki ) kuseri kwechiratidziro.
Iyo Surface Book yakasarudzika idoko rayo, iro rinowedzera bhatiri rekuwedzera (rakabatanidzwa, iwo maviri achapa akakomberedza maawa gumi ekushandisa zuva nezuva), yakanakisa backlit keyboard uye girazi touchpad, madoko uye yakasarudzika Nvidia yakatsaurirwa GPU. Iyo slate yakanyatso kunamira kune ino dock yechiitiko chebhuku, uyezve inogona kusunurwa kana iwe uchida kuishandisa seyete yakazvimirira. Iyo mhando yekuvaka yezvikamu zvese zviri zviviri yakanakisa, asi iko kwekudzikira kwenzira iyi ndiko kunorema kurema: 10 lbs kune maviri.
Pakazara, iro Bhuku reSurface rinoshanda zvikuru zvese seye laptop uye sehwendefa, nepo mamwe akawanda ma2-in-1 asingakunde pamativi ese maviri. Mutengo urikuzoita kuti ive yakaoma kutenga kune vakawanda kunyange, sezvo hwaro vhezheni inotangira pa $ 1349 yeCore i5 processor ine 8 GB ye RAM uye 128 GB yeSDD yekuchengetedza. Iyo Nvidia GPU inodhura madhora mazana matatu nemakumi matatu, nepo ndangariro uye maturusi emabhomba anodhura futi.
Zvakadaro, ndakaona kuti marongero mazhinji anoderedzwa online, saka unofanirwa tevera iyi link yemitengo yepamusoro-uye-dhizaini kana uchifarira iri remasanganiswa.
Dzazvino madhiri paMicrosoft Surface Book
Surface Book ingangodaro iri izere rakakwana remusanganiswa wenguva, asi zvakare inodhura zvakanyanya
Yakanakisa Budget: HP Pavilion x360 11
HP's Pavilion x360 11 ndiyo nzira inodhura kwazvo kupfuura imwe yataurwa pamusoro, inotengesa pamadhora mazana matatu kusvika mazana mana emadhora.
Iyo inoshandurwa iine 11-inch IPS inobata skrini, yakanyatsogadzirwa muviri wepurasitiki uye yakanaka isina-backlit keyboard. Inotyairwa neIntel Celeron kana Pentium mapuratifomu ane 4 GB ye RAM uye dzakasiyana siyana dzekuchengetedza, uye inowana 32 Wh bhatiri. Aya maficha anoita kuti igone kubata zvakanaka nezviitwa zvezuva nezuva uye zvemultimedia zvemukati, chero bedzi iwe uchiramba uchiita zvakawanda.
Pakazara, HP's Pavilion 13 ikombuta yakanaka yechikoro kana shamwari yakanaka isingadhuri yekufamba. Iyo IPS skrini uye yakanaka yekuvaka mhando inoikurudzira pamusoro pemakwikwidzi senge Dell Inspiron 11 3000 kana Acer Chromebook R11, iyo iwe yaunogona zvakare kutarisa kana iwe uchizoda kushandisa zvakatonyanya kushoma pane inoshandurwa uye usazvinetse kupedzisira uine TN skrini.
Dzazvino madhiri pane iyo HP Pavilion x360 11
Iyo Pavillion x360 11 inowana IPS skrini uye bhatiri hombe, asi inogona kugadziridzwa chete neCeleron nePentium processor
Samsung ATIV Bhuku 9 Spin - ongorora - zvigadziro uye mitengo - iyo 13-inch premium inoshandurwa ine yakanakisa kuvaka mhando uye mushandisi ongororo, sarudzo kune avo vanotsvaga yepamusoro-tier gadziriso;
Lenovo Yoga 710 14 - zvigadziro uye mitengo - yepakati-yemutengo ultraportable ine solid specs, yakatsaurwa Nvidia GT 940MX mifananidzo uye 14-inch screen yakavharirwa mukati memuviri wakasarudzika uye wakareruka muviri, unogona kukwikwidzana nemamwe akawanda gumi nematanhatu-inch ultrabooks mune imwechete niche.
Microsoft Surface Pro 4 - zvigadziro uye mitengo - yekutanga 12-inch Windows piritsi ine Core m uye Core i Hardware. Inopa ruzivo rukuru rwepiritsi uye peni rutsigiro rweinking uye kudhirowa, asi hazvina kunaka kunge laptop;
HP Inovavarira X2 - ongorora - zvigadziro uye mitengo - imwe nzira inodhura yeSurface Pro 4, iine kiyibhodhi yakanyanya uye isina fan fan;
Lenovo ThinkPad X1 Yoga - zvigadziro uye mitengo - iyo yakasviba-yakajeka inotendeuka ine 14-inch kuratidza uye Wacom AES digitizer. Inorema chete 3 lbs, asi ine mutengo uye inowanzo mhanyisa kupisa pasi pemutoro.
Tevedza iyi link kune yakanyatso rondedzero yakakurudzirwa 2-in-1 laptops uye mahybrids.
Iwo akanakisa echinyakare macaportables
Mahybrids anoshanduka-shanduka uye anobata ma skrini anogona kubatsira, hapana mubvunzo nezvazvo, asi 2-in-1s inowanzo kuve inodhura uye inorema. Kana iwe uchingoda yakajairika ultraportable neyechinyakare clamshell fomu-chinhu saka izvi pazasi ndizvo sarudzo iwe.
Dell XPS 13 - iyo compact sarudzo
Iyo XPS 13 yanga iri yangu ultraportable yesarudzo kweinopfuura gore ikozvino uye ini handironge kuitsiva. Tarisa uone ongororo yangu yekutanga, yangu 18-mwedzi kuteedzera uye maonero angu eiyo ichangoburwa XPS 13 9350 yeangu zvakadzama chiitiko neano akateedzana. Kubva pakupera kwa2016 kune yeKaby Lake modhi inowanikwa ne60 Wh bhatiri, asi neimwe nzira yakafanana neshanduro dzapfuura. Iyo 2-in-1 XPS 13 ichaburitswa kutanga muna 2017 hazvo.
Iyo compact muviri uye yakasarudzika dhizaini ndiyo yakandiwanisa kuti nditenge iyo XPS 13 pakutanga, uye hapachina imwe komputa ine bezel diki yakadaro inowanikwa mazuva ano. Iyo yemhando yekuvaka, kunzwa, kuratidzwa kwakanyanya, mashandiro, maspika uye vamwe vashoma ndizvo zvikonzero nei ndichiri kuishandisa. Pane zvinhu zvinogona kuvandudzwa, senge iyo keyboard uye trackpad, uye pane zvimwe zvinhu zvaunofanira kungo gamuchira, senge nyaya yekuti inopisa nekukurumidza uye iyo webcam haina kumira zvakanaka, asi zvakazara ndinonzwa kuti iyi laptop haikundike avo vanokoshesa kutakurika.
Iyo XPS 13 9360 ndiyo yazvino modhi panguva ino yekuvandudza, iine Kaby Lake Hardware, Intel HD 620 mifananidzo, inosvika 16 GB ye RAM, NVMe yekuchengetera, 60 Wh bhatiri uye yeThunderbolt 3 chiteshi, sezvakanyanya maficha. Sarudzo dzescreen ndeye FHD matte kana ekubata mapaneru, pamwe neinotyisa QHD + yekubata pani, iyo iri darn inodhura uye ine simba rakakura pahupenyu hwebhatiri, saka kwandiri kwandiri hazvina kukodzera kuve pa clamshell notibhuku.
Muchokwadi, ini ndinokurudzira kutenga iyo gadziriso inouya neCore i5 processor, 8 GB ye RAM, 128 GB SSD uye iyo matte FHD inoratidzira, inowanikwa ne $ 999 pawebhusaiti yaDell uye zvishoma mune mamwe mawebhustores. Iyo CPU inokurumidza zvakakwana kuti ishandiswe zuva nezuva uye zvimwe, zvakadaro iyo laptop haizopisa sezvinoitwa neCore i7 processor, 8 GB ye RAM inofanirwa kukwana muzviitiko zvakawanda zvekushandisa, uye iyo SSD iri nyore kukwidziridzwa.
Iwe unofanirwa zvakare kufunga nezve yapfuura Skylake XPS 9350, kunyanya kana iwe uchifarira kutamba, uko iyo Core i7-6560U kugadzirisa neIntel HD Iris 540 mifananidzo icharatidza simba rayo.
Tevedza iyi link kune yepamusoro-pe-nguva zvinhu pane iripo XPS 13 masisitire uye zvinogona kuderedzwa.
kuongorora kwakazaraDzazvino zvaderedzwa
Dell's XPS 13 inobata kutarisisa neyakaenzana dhizaini uye compact tsoka
Lenovo ThinkPad T460s - yechinyakare
Ini ndinofanira kubvuma kuti ndanga ndiri mushandisi we ThinkPad yeah mazhinji uye ini ndichiri fan hombe kwazvo. Iyo 14-inch ThinkPad T yakateedzana ndeye kwandiri tsananguro yeakakura echinyakare ultraportable, uye iyo ThinkPad T460s ndiyo inonyanya kuzivikanwa nhengo yeiyo mutsara wazvino chizvarwa.
Iyo inopa 14-inch IPS FHD kana QHD matte skrini, yakanakisa backlit keyboard, inoteerera trackpad nema mechanical bhatani mabhatani uye TrackPoint, solid IO uye ine simba Hardware, ese akapfekerwa mukati meyakaomeswa yakavakwa, yakapusa inotaridzika uye compact body, inorema ingori 3 lbs (1.35 kg). Iyo Laptop inotyairwa neIntel Skylake Core U processor, inogona kutora kusvika ku20 GB ye RAM, inotsigira NVMe kuchengetedza uye inowana maviri emabhatiri emukati ane huwandu hwakazara hwe49 Wh.
Iyo ThinkPad T460S inowanikwa mumazhinji masisitimu uye inogona kurairwa tsika futi, asi ini kune mumwe ndinokurudzira kuwana iyo base vhezheni inotengesa madhora mazana mapfumbamwe, ine Core i900 processor, 5 GB ye RAM, 4 GB yekuchengetedza uye FHD skrini . Iyo RAM uye iyo SSD iri nyore kukwidziridzwa, saka pane chikonzero chidiki chekuvatora ivo pamubhadharo kubva kuLenovo. Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo uye zvingangoita zvidzoreso pane akasiyana magadziriso.
Dzazvino zvidzoreso pane iyo Lenovo ThinkPad T460S
Iyo Lenovo T450s ndeye yakasarudzika, uye iwe unogona kuiwana nemutengo mukuru mazuva ano
Apple MacBook Pros - iyo multimedia zvese-zvinotenderera
Apple yakagadziridza iyo Macbook Pro nhepfenyuro senge kunopera kwa2016, ese ari gumi nematatu uye gumi nemashanu masendimita mamodheru. Ose ari maviri akavakwa zvakanaka uye akaonda uye akareruka kupfuura nakare kose, ese ari maviri anopa akanakisa masikirini (isina-kubata, asi inopenya), kumberi maspika akatarisana, makuru mabhatiri, Thunderbolt 13 yekubatanidza uye yakagadziridzwa Hardware. Ose ari maviri anoratidzira Force Kubata trackpad uye mitsva keyboards neButterfly switch uye yakadzora kufamba, yakafanana nekhibhodi pane iyo 15-inch Macbook, uye ini ndingafunga kupa kuyedza muchitoro cheApple kuti uone kana zviri izvo zvaunoda kana kwete . Ose ari maviri anopawo LED Kubata Bhara iyo inotsiva mutsara wemakiyi ekushanda uye inoratidza akasiyana mirairo uye mapfupi echirongwa chese chauri kumhanya. Iyi tambo inosanganisirawo Inobata ID sensor.
Iyo 13-inch Macbook Pro yakavakirwa pane Intel Skylake Core U mapurosesa ane Iris HD 540 kana 550 mifananidzo, inosvika 16 GB ye RAM uye huwandu hwakasiyana hwePCIe yekuchengetedza. Inorema 3.02 lbs uye iri 0.59 ye inch kukora.
Kune mamwe maBhaibheri maviri eMacbook Pro 13, modhi yepasi ine maviri chete maThunderbolt 3 madoko, 54.5 Wh bhatiri uye akajairwa makiyi panzvimbo peTouch Bar inotangira pa $ 1499, uye yepamusoro yekupedzisira modhi ine ina Thunderbolt 3 chiteshi, a 49.2 Wh bhatiri uye iyo Bata Bhawa kutanga pa $ 1799. Tevedza iyi link yeakagadziridzwa masisitimu, zvazvino mitengo uye zvingangoita zvidzoreso.
Iyo 15-inch modhi yakavakirwa pane Intel Skylake Core HQ processor ine yakatsaurwa Radeon 450 mifananidzo, 16 GB ye RAM, PCIe yekuchengetedza uye 76 Wh bhatiri. Iyo inorema 4.02 lbs uye iri 0.61 ye inch kukora.
Iyo Macbook Pro 15 inowanikwa neanechina Thunderbolt 3 madoko uye neTouch Bar inotangira pamadhora 2399. Zvimwe zvakawanda uye nemitengo yakagadziridzwa inowanikwa kuburikidza neiyi link.
Iwo ekare Macbook Pros achiri kuwanikwa muzvitoro uye haafanire kutariswa, kunyanya sezvo iwe uchigona kuvawana zvakachipa. Izvo hazvina kuvakwa pamapuratifomu eazvino ehurdware, asi vachiri makomputa ane hupenyu hwakareba hwebhatiri, akanakisa mamaki uye imwe yakasiyanasiyana IO, saka kana usiri haudi iwo akareruka mhando nyowani kana haudi kungoda. Bhadhara izvo zvakanyanya kune isingachinjike, aya akura Macbook Pros akakosha zvirinani kutaridzika.
Iwo maMacbook azvino uno akaonda, akareruka uye akasimba kupfuura pakutanga, asi iwo haana kudhura uye yavo pfupi-yekufamba keyboard inogona kunge isiri ye munhu wese
Yakanakisa bhajeti: Asus Zenbook UX306UA, UX330UA uye iyo UX305UA
Kana iwe uchinge uchitevera yakasimba uye yakapfava ultrabook, asi uchingova neinenge $ 750 yekushandisa, iyo Zenbook UX305UA inofanira kunge iri pane yako runyorwa.
Uyu anowana 13-inch matte IPS kuratidza, Skylake Core U Hardware, 8 GB ye RAM, M.2 SATA SSD yekuchengetedza uye 56 Wh bhatiri. Yakavakwa zvakare uye yakajeka, inorema 2.85 lbs, asi kune rumwe rutivi inongowana isina-backlit keyboard. Zvakadaro, iyo Core i5 yekumisikidza ine 8 GB ye RAM uye 256 GB yeSDD yekuchengetera inotengesa kwakatenderedza $ 750, saka ndinofunga vazhinji venyu muchabvuma kushomeka kwemwenje wezvese zvimwe zvakasanganiswa mune ino bundle.
Our Ongororo yakazara yeZenbook UX305UA inowanikwa pano, uye iyi link inokuratidza kwaungawana madhiri akanakisa pane ino komputa.
Iyo Zenbook UX305LA inogona kunge isinga fanane seDells XPS 13, asi inosunga Hardware yakafanana uye inodhura zvakanyanya
Zenbook UX306UA ndeimwe yemhando dzakagadziridzwa dzeUX305UA. Iyo inowana mutete uye wakareruka muviri (2.65 lbs), nyowani backlit keyboard, yakagadziridzwa trackpad uye yakati kurei zvishoma 57 Wh bhatiri, uku uchichengeta iwo akafanana Hardware specs. Idzo kudzikira ndiko kuwedzera kwetembiricha yemuviri uye ruzha rwe fan, pamwe neiyo shoma IO, ese "mabhenefiti" eiyo slimmer kesi. Pakazara, iyo Zenbook UX306UA iri nhanho-inokwira kubva kuUX305UA uye haisi kuzotengesa kune zvimwe zvakawanda futi. Tevera iyi link ye up-to-date info pamusoro pekugadzirisa uye nemitengo, uye iyi yemafungiro edu akateedzana.
Hazvishamise, asi Asus anopawo Zenbook UX330UA 13-incher, mumwe mutsivi weiyo UX305 modhi, ine dhizaini yakati siyanei, Intel Kaby Lake Hardware, asi neimwe nzira zvakafanana neiyo UX306: 1.2 kg uremu, 57 Wh bhatiri, backlit keyboard, sarudzo yeFHD kana QHD + matte skrini. Unogona verenga zvakawanda nezve iyi mune yedu yakazara ongororo or tevera iyi link yezvazvino zvigadziriso nemitengo yakagadziridzwa.
Asus Zenbook 3 UX390 - ongorora - kumisikidzwa nemitengo - iyo ultracompact laptop ine 12.5 inch screen uye Intel Kaby Lake Core U Hardware, yakaiswa mukati mealuminium unibody kesi inorema pasi pe1 kirogiramu.
Dell XPS 15 - ongorora - zvigadziro uye mitengo - compact multimedia 15-incher ine imwechete yakamanikana bezel seiyo XPS 13, asi yakasimba kwazvo Hardware uye yakatsaurirwa Nvidia mifananidzo;
Razer Nereza namano - ongorora - zvigadziro uye mitengo - compact notibhuku ine 12.5-inch screen, yakanakisa kuvaka mhando, yakasimba specs uye kuenderana neRazer Core kuburikidza neThunderbolt 3 port. Zvikamu chete avhareji ongororo nevatengi hazvo, ndosaka zviripo muchikamu chino;
Acer Swift 3 - ongorora - zvigadziro uye mitengo - iyi Laptop inokutorera iwe wakanaka wakavakwa esimbi muviri, wemazuva ano Hardware, matte 14-inch screen uye hurefu hupenyu hwebhatiri uye ingangoita $ 100 yakachipa pane mamwe madhizaini akafanana, zvirinani muUS.
Acer Aspire S13 - ongorora - zvigadziro uye mitengo - uye yakanaka 13-inch notibhuku ine yakasimba maspec uye mutengo unodhura tag, yakanaka nzira kune Zenbook yataurwa pamusoro;
Lenovo ThinkPad X260 - zvigadziro uye mitengo - compact account bhizimusi risingachinjiki ine 12.5-inch screen, yakanakisa keyboard, yakasimba IO uye hombe bhatiri;
Dell Latitude 14 7000 - zvigadziro uye mitengo - Imwe nzira yaDell yeiyo ThinkPad T460S, imwe yakanaka bhizinesi laptop ine 14-inch screen uye yakasimba maficha, asi kazhinji inodhura kupfuura shanduro yaLenovo;
Iyo yakanakisa yemitambo ultraportables
Ichi chikamu chakachengeterwa ezvinyorwa zvine simba-zvakapenya-uye-zvine simba ine yakakwira magumo yakatsaurwa mifananidzo machipisi (Nvidia GTX 970M kana yakakwira), ayo anokwanisa chaizvo kumhanyisa mitambo yazvino nemazvo. Nekuda kwekugadziriswa pamwe nequad-core processor, yakawanda RAM uye dzakawanda nzira dzekuchengetera, zvikamu zviri muchikamu ichi zvine mashandiro emabasa akakwana pamwe nesarudzo dzakanaka dzakanaka kune programmers, graphic artists, mainjiniya nevamwe nyanzvi dzinoda huwandu hwakakura hwe kugadzira simba.
Rondedzero yakadzama ye yakazara-saizi yekutamba malaptop neNvidia 970M uye 980M mifananidzo inowanikwa pano, uye chinyorwa chakadzama pane laputopu ine Nvidia 1060, 1070 uye 1080 mifananidzo ichave iripo panzvimbo iyi munguva pfupi iri kutevera.
Kana uine madhora mazana maviri emadhora ekushandisa pane inotakurika mitambo yekutamba, iyo Razer Blade ndiyo yako yepamusoro kubheja. Iyo compact 2000-inch laptop inorema 14 lbs uye inowana iyo Core i4.2-7HQ processor, 6700 GB ye RAM, NVMe yekuchengetera uye Nvidia GTX 16 mifananidzo (kana GTX 1060M pane ekare mamodheru), pamwe ne970 Wh bhatiri uye 70 x 3200 px yekubata skrini ine IGZO IPS pani. Kwete zvimwe zvakawanda zvaunogona kubvunza kubva pachigadzirwa chakadai.
Kuita kwacho kwakasimba, nekupwanya zvishoma, kunyangwe nyaya yacho ichipisa mune dzimwe nzvimbo pasi pemutoro unorema, iyo RGB keyboard uye girazi trackpad yakanaka kwazvo futi, uye iko kuvaka uye kwakazara kuvaka mhando kuri kumusoro uko padyo neMacbook kana iyo Pamusoro Bhuku. Iyo GTX 970M chip inokwanisa kusundira akawanda mazita nematanho epamusoro ehumwe ruzivo, asi iyo Nvidia GTX 1060 kumisikidza ine simba rakanyanya uye zvirokwazvo inofanirwa kuwana kana iwe usinga farire kubhadhara imwe yekuwedzera kune iwo azvino mamodheru.
Chimwe chinowedzerwa cheBlade Chiteshi cheThunderbolt 3 uye chokwadi chekuti inowirirana neiyo Razer Core, kana iwe uchizoda rimwe giraidhi simba. Ongororo yedu yeRazer Blade 14 inokuudza zvese nezvehunhu hwayo uye quirks, nepo kuongorora kwedu kweRazer Core inoita kuti iwe uzive zvaunotarisira kubva kune ino uye kuti inoshanda sei painokochekerwa neBlade.
Blade 14 inotanga pa $ 1800 unova mutengo wakaringana kubhadhara iyo yainopa, asi kumisikidzwa kwakakwenenzverwa kwakaringana kunogona kusvika kunosvika madhora zviuru zvitatu. Tevera iyi link yezvinhu zvazvino kumisikidzwa uye zvingangoita zvidzikiso.
Dzazvino madhiri paRazer Blade 14
Iyo Razer Blade 14 ndiyo inogoneka kuti uwane mazuva ano, kana uri mubhajeti rako
MSI GS43 Phantom Pro / GS40 Phantom
Iyo MSI GS43 Phantom iri nyore uye inodhura imwe nzira yeRazer Blade 14. Iyo zvakare iri compact uye yakajeka 14-incher, asi inowana dhizaini-yakanangana nemitambo dhizaini, ine zvinhu zvinopenya uye marogo, nepo mhando yekuvaka iri yepakati chete, sezvo iyo laputopu isinganzwe kunge yakasimba uye yakanyatsogadzirwa seBlade. Iyo keyboard ndeimwe chinhu iyo MSI inogona kunatsiridza pachinhu ichi.
Hardware zvine hungwaru zvakadaro, iyo MSI GS43 yakasimba, ine Skylake Core i7 processor, 16 GB ye RAM, Nvidia GTX 1060 mifananidzo uye akasiyana marudzi ekuchengetedza, pamwe ne 61 Wh bhatiri. MSI yakaenda neyemurume FHD IPS skrini, inova sarudzo yakanaka kwazvo kune yakadaro laptop yemitambo. Kuita kwacho kuri muchokwadi stellar paGS43, isina kubvunda uye nepo pasi penyaya ichiwana mutoro, inotomhanya kutonhodza pane mamwe matete uye akareruka sarudzo ane mamwe akafanana.
Seye parutivi noti, iyo GS43 inowanawo Thunderbolt 3 uye mishumo inoratidza kuti inoshanda chaizvo neiyo Razer Core futi.
Pakazara, iyo MSI GS43 isarudzo yakasimba kune avo vauri kutsvaga yemitambo ultraportable kutenderedza iyo $ 1500 kusvika $ 1700 mucherechedzo. Iwe uchazowana zvimwe nezvazvo kubva kune yedu yakazara ongororo, uye iwe unokwanisa tevera iyi link kune rumwe ruzivo nezvezvazvino masisitimu uye kumusoro-kune-zuva mitengo.
Iyo GS40 Phantom zvakare chishandiso chaunogona kufunga, mutsigiri weGS43 ane Skylake Hardware uye Nvidia GTX 970M mifananidzo, kunyanya sezvo uchikwanisa uzviwane zvakadzikiswa mazuva ano. Tine zvakare yakaongorora iyo GS40 pano pane saiti, kana uchifarira.
Dzazvino madhiri pane iyo MSI GS43 Phantom Pro
Iyo MSI GS43 ndiyo imwe nzira inodhura kune avo vari kutsvaga 14-incher neNvidia 970M mifananidzo
Asus ROG Strix GL502VS uye GL502VM
Kusiyana nesarudzo mbiri dziri pamusoro, iyo Asus ROG Strix GL502s yakatetepa (~ 0.95 ″) uye yakajeka mwenje (~ 5.6 lbs) yakazara-saizi malaptop ane 15.6-inch skrini. Iyo GL502VY ndiyo yekutanga sarudzo yevaviri, neNvidia GTX 1070 8 GB mifananidzo uye G-Sync rutsigiro, nepo GL502VM iri sarudzo inodhura neNvidia GTX 1060 6 GB mifananidzo. Dzimwe shanduro dzekare dzinowanikwawo, iyo GL502VT (Nvidia 970M mifananidzo) uye GL502VY (Nvidia 980M mifananidzo), asi ndikapihwa maPascal machipisi akamhanya zvakanyanya kupfuura vamwe veMaswell, ini ndaizongotarisa mamodheru matsva kana achifarira yakasimba mitambo yekutamba.
Ivo vaviri vanogovana zvakafanana dhizaini dhizaini, yakanaka kuvaka mhando, yakanakisa keyboard uye yakasimba IO (hapana Thunderbolt 3 chiteshi kunyangwe). Izvo zvakare zvinosanganisira imwecheteyo Core i7-6700HQ processor, mbiri-yekuchengetedza sarudzo uye 64 Wh bhatiri, asi iyo GL502VS inokwira kusvika ku32 GB ye RAM (2xDIMMs), nepo GL502VM ichingogumira kune chete 24 GB ye RAM (8 GB yakatengeswa uye imwe yekuwedzera DIMM).
Sarudzo dzechidzitiro dzakasiyana zvakare, kunyangwe dzingaite senge dzakafanana pakuona kwekutanga, sezvo ese ari maviri FHD IPS mapaneru. Nekudaro, iyo GL502VS inowana yakafara-gamut kuratidza neG-Sync rutsigiro, nepo GL502VM ichishaya G-Sync.
Sezvinotarisirwa, iyo GL502VS inokwira zvirinani mumitambo uye, zvinoshamisa kuti, inomhanya zvishoma kutonhorera, asi panguva imwe chete ichirira. Iyo GTX 1060 yakashongedzerwa GL502VM inoita nemazvo mumazita mazhinji zvakare uye iyo inotonhorera sisitimu ine hukasha, iyo inotungamira kune yakakwira kumashure-kesi tembiricha.
Iyo Asus ROG Strix GL502VM ndiyo zvakare inodhura vhezheni yevaviri, kutanga kutenderedza $ 1300 (rumwe ruzivo uye zvingangoita zvidzikiso zviripo pano). Iyo GL502VS kune rumwe rutivi inoenda ne $ 1900 kumusoro, uye iwe ucha tsvaga zvimwe zvakawanda nezvazvo uye up-to-date mitengo nekutevera iyi link.
Iyo 17-inch vhezheni yeiyo GL502VM inowanikwawo, kana iwe uchizoda hombe skrini, uye iwe unogona kuwana yedu Ongororo yakazara yeROG Strix GL702 pamusoro apa.
Iyo Asus GL502VM uye GL502VS inogovana zvakafanana aesthetics, asi dzakasiyana nenzira dzakawanda pasi pehodhi
Budget uye compact: Asus Zenbook UX303UB uye UX310UQ
Iyo Zenbook UX303UB ndeye 13-inch inogadziriswa neNvidia GT 940M yakatsaurwa mifananidzo. Iyo haina kusimba senge sarudzo dziri pamusoro uye haina kudhura zvakanyanya kana, asi yakanyanya kuumbika uye inotakurika.
Inoenda kwakatenderedza $ 1200 panguva ino yekuvandudza, asi inotengesa zvishoma pane akasiyana madhiri, saka ungangoda kunyatso tarisa pazviri. Kune iro rudzi rwemari urikutsvaga simbi yekuvaka, yakanaka backlit keyboard, QHD + touchscreen kana FHD matte pani mune mamwe matunhu, iyo Core i7-6500U processor, 12 GB ye RAM, 512 GB SSD, Nvidia 940M mifananidzo uye 50 Wh bhatiri.
We wadzokorora vhezheni yapfuura pano pane saiti, yakafanana neUX303UB munzira dzese kunze kwekuti iyo nyowani modhi inovandudzwa Hardware uye yakavandudzwa skrini.
The Zenbook UX310UQ ndiyo yakagadziridzwa vhezheni yeUX303UB, iine mutete mutete uye wakareruka, Skylake Hardware uye Nvidia GT 940MX mifananidzo. Haisati yawanikwa muzvitoro panguva ino yekuvandudza, asi unogona tevera iyi link yezvidimbu pamusoro pekugadziriswa uye nemitengo kana iwe uchiverenga ichi chinyorwa.
Iyo Zenbook UX303UB inopa yakasimba specs uye yakatsaurwa mifananidzo mune inotakurika 13-inch muviri
Gigabyte P34W - ongorora - zvigadziro uye mitengo - 14-inch notibhuku ine Nvidia 970M mifananidzo, quad-core Skylake processor uye nemutengo usingaenzanisirwe, asi kwete yakanakisa yekuvaka mhando;
Alienware R13 - zvigadziro uye mitengo - kwete hazvo yakajeka uye inotakurika, asi compact, sezvo iyi iri 13-inch laptop ine Skylake Core U processor uye Nvidia 960M mifananidzo; modhi yakagadziridzwa neKaby Lake Hardware uye Nvidia 1060 mifananidzo inoziviswa kupera kwe2016;
Gigabyte P35X - ongorora - zvigadziro uye mitengo - yakatetepa uye compact 15-inch notibhuku ine Nvidia GTX 980M mifananidzo uye mutengo wakanaka;
Dell Precision 15 5510 - ongorora - yakasimba uye compact 15-inch workstation ine rakamanikana screen-bezel, UHD yakafara gamut pani, Skylake Core HQ uye Xeon processor uye Nvidia Quadro mifananidzo.
Tevedza iyi link kune yakasarudzika sarudzo yemitambo ultraportable uye tarisa iyi posvo ye rondedzero yemakanakisa akazara-saizi emabhuku ekunyorera iwe aunogona kuwana mazuva ano.
Iwo akanakisa ese-anotenderera (multimedia) malaptop
Laptop inotenderera-yese ndiyo sarudzo yaunoita kana iwe uchida komputa yakavakwa zvakanaka, inowana Hardware Hardware, yakanaka keyboard uye yakanaka screen, uye inogona kubata ese marudzi ese ezvekushandisa zvezuva nezuva, kubva pakugadzirisa zvinyorwa kusvika kubhurawuza, kune vhidhiyo zvemukati nemitambo.
Pazasi iwe unowana yangu anodiwa anotakurika ese-anotenderera malaptop, kana multimedia malaptop sekudanwa kwaanoitwawo. Ini ndasanganisira mayuniti ane mahombe IPS skrini, ekukurumidza mapurosesa uye epakati-renji yakatsaurwa mifananidzo, uye zvakare mashoma mashoma anodhura sarudzo kune bhajeti yakatarisana vatengi pakati pako.
Acer Aspire V15 uye V17 Nitro - sarudzo dzakaringana
Acer's Aspire Nitros Nhema Edition inoratidzira iyo yakaoma kuenzanisa pakati pezvimiro, maficha, kutaridzika, kuvaka mhando nemutengo, ndosaka vakagara kumusoro kwechikamu chino.
Acer inopa maviri akateedzana, iyo V15 Nitro ine 15.6-inch skrini uye yakakura V17 Nitro ine 17.3-inch kuratidzwa, uye ivo vanogovana mazhinji ehunhu hwavo, kusanganisira mitsara yekushongedza, iyo nhema yerabha kesi kupedzisa, iyo chiclet keyboard uye yakawanda yeiyo hardware specs.
Iwo maviri anofambiswa nemagetsi neIntel HQ processors uye Nvidia GTX 960M 4GB mifananidzo, ine anosvika 32 GB ye RAM uye mhando dzakasiyana dzekuchengetedza, bundle yakafanana 52 WH bhatiri uye inogona kutenderedzwa pamwe neiyo FHD kana UHD matte isina-bata ekuratidzira. Mabhatiri idiki diki, nekudaro aya maNitros haagare kwenguva yakareba pakubhadharisa seimwe sarudzo, asi kuti parutivi pane zvikonzero zvishoma zvekunyunyuta, sezvaunowana kubva kuongororo dzakadzama dzezvose zviri zviviri V15 Nitro uye V17 Nitro.
Iyo 15-inch vhezheni inotanga kutenderedza madhora mazana mapfumbamwe ekugadzirisa kweCore i900 ine SSD yekuchengetedza uye iyo FHD skrini (tarisa iyi link kune epamusoro-soro-mitengo), apo iyo 17-inch modhi iri ingangoita $ 50 inodhura, ichiita iyo V17 Nitro sarudzo yakanakisa kune avo vanoda hombe screen notibhuku. Tevera uku kubatanidza kune mamwe mashoko.
Iyo Acer Aspire Nitros inoratidzira muyero wakanaka pakati pekutakurika, maficha uye zvigadzirwa zvehardware, uye tengesa iwo mitengo chaiyo zvakare
Dell XPS 15 - iyo yekutanga sarudzo
XPS 15 ndeimwe yemakomputa akareruka uye akareruka (4.4 lbs) 15-inch anowanikwa mazuva ano, asi zvakare inodhura, saka chingori chipo kune avo vanokoshesa ayo ekutanga aesthetics uye vanovaka mhando, yakatetepa screen bezel uye maficha epamusoro.
Laptop iyi inowanikwa mune mashoma akasiyana mavhezheni, ese anopa Core i3, i5 kana i7 HQ processor, inosvika 32 GB ye RAM uye Nvidia GTX 960M 2GB mifananidzo. Vashandisi vane sarudzo pakati peiyo FHD matte skrini kana iyo UHD yekubata skrini, uye kungave iri 84 Wh bhatiri kana diki 56 Wh bhatiri pamwe ne2.5-yekuchengetedza bay.
Pakazara XPS 15 ibhuku rakasimba, kunyange hazvo paine zvimwe nyaya vatengi vangamhanyira madziri, sezvacherechedzwa mune yedu ongororo. Sechimwe chinyorwa, iyi laptop inowana chiteshi cheThunderbolt 3 uye inoshanda mushe mushe neRazer Core.
Iwo mavhezheni eiyo XPS 15 anotanga pa $ 999 pawebhusaiti yaDell, kune iyo isiri-yekubata skrini, iyo Core i3 processor, isina mifananidzo yakatsaurirwa, 8 GB ye RAM, HDD yenguva dzose uye iyo 56 Wh bhatiri. Iyo Laptop inodhura chaizvo kana iwe uchinge waifungira iyo zvakadaro, saka tarisira kubhadhara kutenderedza $ 1700- $ 2000 yeCore i7 processor, GTX 960M mifananidzo, iyo UHD kuratidza, 16 GB ye RAM, SSD yekuchengetedza uye iyo 84 Wh bhatiri. Izvo zvine mutengo, asi iyo XPS 15 harisi bhuku rekare uye hapana kushamisika Dell anobhadharisa premium yayo.
Ziva izvozvo iwe unowana akawanda marongero akaderedzwa online, saka chera madhiri kana uchifarira imwe yeizvi.
Iyo XPS ndeye compact, premium uye mutengo 15-inch laptop
Dell Inspiron 7559 - yakanakisa-kutenga sarudzo
Iyo Inspiron 7559 ndeye yakadzika-pasi-pasi laptop ine mutengo wakanakisa wezvainofanira kupa. Izvo hazviwane sarudzo imwechete mune zvigadzirwa, iyo yekuvaka mhando kana yakamanikana bezel yeiyo XPS 15, asi kune yepakati-renji kifaa yakanyatso kuvakwa mushe uye haitarisike yakaipa futi.
Anokwana $ 850 achakutsvakira iyo Core i5 HQ processor, 8 GB ye RAM, 256 GB SSD, Nvidia GTX 960M 4GB mifananidzo, FHD IPS matte skrini uye 74 Wh bhatiri, gadziriso inokwanisa kubata zvakanaka mabasa ezuva nezuva, mabasa anoda mabasa uye mutambo. Kune rimwe divi, zvichienzaniswa nemamwe akafanana akamisikidzwa 15-inchers, iyo Inspiron 15 7559 inorema (5.8 lbs), bulkier uye inowana mushy keyboard, asi yayo zvakare inodhura uye ndosaka iri yakakurumbira.
Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo, mushandisi ongororo uye akagadziridzwa mitengo panguva iyo uri kuverenga ichi chinyorwa.
Iyo Inspiron 7559 ndiyo yakanakisa-kutenga sarudzo, ine yakanakisa maficha uye mutengo wakanaka
Yakanakisa bhajeti: Acer Aspire E15
Iyo Aspire E15 ndeye 15-inch notibhuku iyo inotengesa kwakatenderedza $ 500 kusvika $ 600. Inowana ese epurasitiki muviri unowanikwa murima-grey kana chena inorema 4.8 lbs (2.2 kg), uye iyo keyboard haina kudzoserwa kumashure, asi mazhinji mamwe maficha akasimba pamutengo.
Iyo Hardware inosanganisira Core U Skylake processor, 8 GB ye RAM, 256 GB SSD uye yekuwedzera 1 TB HDD yekuchengetera vakawanda, Nvidia GT 940MX mifananidzo, bhatiri 42 WH uye IPS matte FHD skrini. Izvo zvichave zvinomhanya zvakakwana zvemabasa ezuva nezuva uye zvinokwanisika kubata mimwe mitambo zvakare, iine yakaderera kune yepakati ruzivo. Kana iwe ukasarudza vhezheni isina SSD yekuchengetera iwe unonyatsowana iyo Aspire E15 yepasi pemadhora mazana mashanu, asi iyo SSD inowedzera zvikuru iko kuita saka iwe unofanirwa kuichengeta.
Tevedza iyi link kuti uwane rumwe ruzivo nezve masisitimu aripo nemitengo yavo.
Iyo Acer Aspire E15 inogadzirwa nepurasitiki, asi inopa yakanakisa maficha pamutengo
Asus K501UW uye K501UX - zvigadziro uye mitengo - iyi inopa Skylake Core U Hardware, IPS skrini uye Nvidia GTX 950M kana 960M mifananidzo yepasi pe $ 850, ichiita kuti ive yakasimba-kutenderedza yeavo vanokoshesa hupenyu hwebhatiri kana isingakwanise kubata sarudzo dziri pamusoro;
Asus ROG GL552VW - ongorora - zvigadziro uye mitengo - iyo ROG GL552VW inopa yakasimba specs uye ine yakanakisa mutengo, asi pane chunky uye inorema, saka kwete inotakurika kana yakasimba dura yakavakirwa sarudzo kunze uko;
Lenovo Yoga 710 14 - zvigadziro uye mitengo - iyo Yoga 710 14 ndeye 2-in-1 inoshanduka ine inokwanisa Hardware, yakanaka IPS skrini uye Nvidia GT 940MX mifananidzo. Iwe uchabhadhara premium yeiyo fomu chinhu, asi kana iwe uchida inotakurika inotenderera-yakazara hybrid nemutengo wakaringana, iyi ndiyo imwe.
Chinyorwa chakakura chemazere-size anotakurika malaptop anowanikwa pamusoro apa, kana iwe uchifarira dzimwe sarudzo.
Iwo akanakisa asina fanika asingachinji
Kana iwe uchida zvachose yakanyarara komputa isina fan kana kutenderera yakaoma-dhiraivha mukati, idzi sarudzo pano chaidzo ndidzo dzako. Ingo ramba uchifunga kuti mapuratifomu akanyoroveswa haasi kuzopa iwo akaenzana emagetsi seaya akatonhodzwa nefani, saka iwe unofanirwa kungowana imwe yeizvi zvezviitwa zvezuva nezuva uye mashoma kuita zvakawanda.
Ini ndanyora zvandinofarira sarudzo pazasi, uye a runyorwa rwakakwana rweasina fanap ultraportable inowanikwa mune ino chinyorwa kana iwe uchifarira dzimwe sarudzo.
Asus Zenbook UX360CA / CAK - yakanyanya-kutenga inotendeuka
Zenbook UX360CA / CAK inowana kumwe kudomwa mushure mekunge yaonekwa seimwe yeakanakisa 2-in-1s, nekuti yakavakirwa pane isina fanhu Core M Hardware. Hatisi kuzodzika-kudzika zvakare, pfugama kumusoro kuti uone kuti sei tichida iyo UX360CA zvakanyanya.
Mune mashoma mazwi zvakadaro, ichi chakachinjika chinoshandurwa chine 13-inch skrini, yakanaka Hardware specs uye 54 Wh bhatiri. Iyo zvakare yakadzvanywa kwazvo mutengo, ine base base vhezheni inotangira pa $ 699 uye inosanganisira iyo Core m3 processor ine 8 GB ye RAM uye 256 GB yeSDD yekuchengetedza, zvakakwana zvakakwana kushandiswa kwezuva nezuva.
Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo, mushandisi ongororo uye nemitengo yazvino.
HP Specter 12 X2 - inokwanisika kutsauka
Iyo Specter X2 inosvikika, piritsi rine doko rekhibhodi. Iyo inopa yakanaka tsananguro uye mashandiro mune mutete uye wakasviba aluminium muviri, sezvaungaona mumifananidzo pazasi. Iyo zvakare inosanganisira 12-inch screen ine peni rutsigiro, Skylake Core M Hardware, 42 Wh bhatiri, ine hunhu IO uye keyboard doko ine backlit makiyi, ese anorema akatenderedza 2.7 lbs.
Iwo akakwidziridzwa akasarudzika eX2 ari kudhura ($ 800 zvichikwira), asi iyo Core m3 modhi ine 4 GB ye RAM uye 128 GB yeSDD yekuchengetera inoenda pasi pe $ 600 mazuva ano (iwe uchaona kuti kupi nekutevera iyi link). Iyo dhibhodhi dhoku inosanganisirwa pane ese mamodheru, nepo peni inosanganisirwa chete pane mamwe magadzirirwo, asi chishandiso chinowana chinoshanda digitizer saka ichazoshanda nemapeni mazhinji, hapana chaicho chikonzero chekutenga iyo HP imwe.
Iyo Specter X2 ndiyo yandinofarira sarudzo mune ino chikamu che2-in-1s
Apple Macbook 12 - iyo yekupedzisira sarudzo
Iyo Macbook ndeimwe yeakareruka uye akatetepa echinyakare echikwata chekomputa kunze uko. Inorema 2.02 lbs (0.92 kg) uye ingori .5 ″ (13 mm) gobvu, asi kunyangwe izvi zvakavakwa zvakanyanya uye zvinotakura zvimwe zvakanaka zvigadzirwa.
Nyaya yacho yakanyatsogadzirwa nealuminium, iyo keyboard iri backlit uye iyo skrini inowana yakakwira-resolution IPS pani, isina kubata. Kana vari vekunze, iyo Macbook inofambiswa neIntel Core m Hardware ine 8 GB ye RAM uye 256 kana 512 GB yeSDD yekuchengetera, iine 41 Wh bhatiri iri kuzopa kutenderera maawa masere ekushandisa chaiko zuva nezuva. Kwete zvakaipa zvachose.
Iyo Macbook inodhura hazvo, iyo base vhezheni inotengesa $ 1299 uye inosanganisira iyo Core m5 processor ine 8 GB ye RAM uye 256 GB yekuchengetera nzvimbo. Iwe urikubhadhara premium yeiyo yakazara mhando uye iyo mhando, hongu, asi kupihwa iwo mafekitori, iyo Macbook haina kunyanyo kudhura zvakanyanya kupfuura mamwe ma premium Core m sarudzo. Vanogona kutenga vatengi vanofanirwa kuziva kuti iyi Laptop inowana isina kujairika keyboard ine kushomeka kwekufamba uye imwe chete USB-C chiteshi, saka iwe ungatofanira kushandisa yakawedzera pane maadapter kana padoko.
Tevedza iyi link kune rumwe ruzivo, mushandisi ongororo uye zvingangoita zvidzikiso.
Iyi ndiyo Apple Macbook 12
Yakanakisa bhajeti: Acer Chromebook R11
Iyo R11 iri Chromebook, saka haisi kumhanya Windows asi ChromeOS, yakapusa uye yakachengeteka software inoreva kupa chiitiko chakasimba muInternet zvinoitwa zviitiko senge kubhurawuza, kugadzirisa zvinyorwa, kutenderera zvemultimedia zvemukati nemumhanzi, nezvimwe.
Iyo Chromebook R11 ndiyo yakanyanya-kutenga mukirasi yayo. Inotengesa kwakatenderedza madhora mazana maviri nemakumi manomwe uye rudzi rwemari urwu rwunowana yako kabhuku kachena ine inoshanduka 270-inch IPS touchscreen, Intel Celeron N11 processor, 3150 GB ye RAM, 2 GB yekuchengetera uye 32 Wh bhatiri, ayo akasimba specs ye mini-laptop mune ino mutengo renji. Hazvishamisi kuti Chromebook R35 ndeimwe yemakomputa anotengesa zvakanyanya muUS uyezve ndeimwe yeanonyanya kukosheswa, achipa wongororo dzakanaka nevatengi vakawanda.
Iyo Chromebook R11 ndiyo yakanyanya kukosha sarudzo mukirasi yayo
Acer Chinja Alpha 12 SA5-271 - zvigadziro uye mitengo - iri hwendefa rine keyboard keyboard, uye panguva imwechete imwe yeasina mashandiro mashoma faniro yeCore U Hardware chikuva. Inoita mushe uye ine mutengo chaiwo, asi haikwanise kumhanya kwenguva yakareba uchibhadharisa.
Toshiba Portege Z20t - zvigadziro uye mitengo - iyo Portege ibhizimusi 2-in-1 inowoneka (piritsi + doko) ine kesi yakasimba, yakanakisa keyboard, Core M Hardware uye mabhatiri maviri ane huwandu hwakazara hwe72 Wh. Izvo zvinorema hazvo, pa3.5 lbs yezvikamu zvese zviri zviviri, uye zvakare inodhura chaizvo, ndosaka ichi chisiri chisarudzo chevanhu vese uye chinongowana kutaurwa kwekuremekedzwa pano.
Microsoft Surface Pro 4 - zvigadziro uye mitengo - chete vhezheni vhezheni yeSurface Pro 4 ndiyo inowanikwa musina fanless vhezheni, ine Core m3 processor, 4 GB ye RAM uye 128 GB yekuchengetera, ye $ 899, kusasanganisa iyo Folio Yekhibhodi. Inodhura, asi zvikasadaro rakasimba slate ine yakanakisa skrini, peni rutsigiro, hupenyu hwebhatiri uye kuvaka mhando.
HP Pavillion x360 11 - zvigadziro uye mitengo - Iyo Pavilion x360 11 ndeimwe yeakanakisisa-kutenga compact 2-in-1s ine Windows zviripo mazuva ano uye mumwe wevashoma kwazvo kuratidza IPS skrini mune iyo $ 250 kusvika $ 400 mutengo wemitengo. Inofanirwa kunge iri pane yako runyorwa kana iwe uri pane yakaoma bhajeti.
Chromebook - aya mapikicha akasimba muiyo sub $ 300 mutengo renji, yakanakisa yebasa reWebhu uye zviitiko zvishoma. Mazhinji Chromebook haana fan uye iwe unowana yakakura sarudzo mune ino positi, pamwe neruzivo pamusoro pesarudzo dzakanakisisa dziripo.
Tevedza rondedzero iyi kuti uwane hwakadzama runyorwa rwevasina mafani ekupfuura iwe ungafunga nezvawo.
Laptops ine digitizer uye peni rutsigiro
Ichi chikamu chipfupi uye tichachikudziridza munguva pfupi iri kutevera, apo isu tiri kushanda pane yakazvitsaurira-chinyorwa pane iyi chaiyo nhaurwa, iyo inosanganisirawo ruzivo nezve mhando dzeanogadzira uye mapeni anowanikwa mazuva ano.
Parizvino, akati wandei sarudzo dzakanaka neinoshanda digitizer ndeaya:
2-in-1 mahwendefa (zvinoshatisa): Microsoft Surface Pro 4 uye Surface Book, Samsung Galaxy Tab Pro S, Asus Transformer 3 uye 3 Pro, HP Specter X2 uye Elite X2, Dell Latitude 13 7000, Toshiba Portege Z20t, HP Pavilion 12 x2, Huawei Matebook, Acer Aspire Shandura Alpha 12 ;
2-in-1 inoshandurwa (360-degress inotenderera skrini): HP Specter x360 13 uye 15, Lenovo ThinkPad X1 Yoga, Yoga 260 uye 460, Lenovo ThinkPad P40.
Kunze kweizvi, iyo HP Pavilion 12 x2, Huawei Matebook, Lenovo ThinkPad P40 uye X1 Yoga vanowana chizvarwa chitsva Wacom AES digitizer.
Gara wakarongedzerwa kune yekuvandudza.
Iwo akanakisa malaptops ari pasi pe $ 500
Paunenge uchitarisa pamalaptop anodhura iwe une sarudzo shoma dzekufunga.
Chromebook - ChromeOS mabhuku ekunyorera akakura pamabasa ewebhu-based, nemitengo inotangira pasi kusvika pamazana zana nemakumi mashanu emadhora uye masikirini ari pakati pe150 kusvika 10 inches. Yakakura pamabasa asina kujairika sekureba sekunge iwe wakabatana neInternet, kwete izvo zvakanaka zvekushandisa pasina. Rondedzero yakadzama yeakanakisa anowanikwa Chromebook anowanikwa mune ino posvo.
Compact mini malaptop - Windows komputa ine diki 11 kusvika 13-inch skrini uye ezasi-magumo Hardware specs. Dzimwe sarudzo dzinotengeswa pasi pe $ 300, asi kana iwe uchida chikuva chinokurumidza, bhatiri hombe kana IPS skrini uchafanirwa kushandisa imwe yakati wandei.
Yakazara-saizi laptop - iwe unogona kuwana echinyakare zvinyorwa zvemabhuku zvine 15-inch skrini mune ino bhajeti uye kunyange zvinomanikidza Hardware specs, seCore i3 uye i5 processor, 4-8 GB ye RAM uye inochengetedza kuchengetedza, kusanganisira maDDD mune dzimwe nguva. Izvi zvinodimbura mamwe makona pahunhu hwekuvaka uye nesarudzo yezvinhu, uchiwana ese epurasitiki makesi. Vazhinji vanowanawo bhatiri diki, isina-backlit keybiard uye TN skrini, asi kana ukachera zvine hungwaru unotowana IPS mapaneru mune ino mutengo renji.
Pane muunganidzwa muhombe wemalaptop anozivikanwa anotengesa pasi pe $ 500 pamusoro apa, ine vashandisi wongororo uye zvimwe zvekuwedzera. Uye kana iwe uchifarira sarudzo yangu yemhando yepamusoro-inodhura zvigadzirwa, ipapo chinyorwa ichi ndechenyu, ine sarudzo dzakasimba dzinoenda pasi pe $ 600 kana premium sarudzo mu $ 600 kusvika $ 1000 renji.
Anotakurika malaptop anoenderana nesaizi size
Iyi nhaurwa yakafukidzwa mune anotevera akapatsanurwa zvinyorwa:
11.6-inch ultrabook kana zvidiki ;
12-inch ultraportables (inovandudzwa);
13.3-inch ultrabooks (kuvandudzwa);
akazara saizi mabhuku emabhuku ane 14, 15-inch kana makuru masikirini.
Asi ini ndichawedzera mazwi mashoma pane zvaunotarisira kubva kukirasi yega yega.
Iko kupihwa kwe-Ultra-compact makomputa ane gumi-masendimita masikirini, anoteedzera-enetbook anozivikanwa makore mashoma apfuura, inogumira kune mashoma 10-in-2s senge Asus Transformer Pad kana iyo Acer Aspire Shandura mhuri gumi. Ivo vanowana yekubata-skrini, yakavakirwa pane yakaderera-simba Hardware uye vanongokwana chete zvakakwana kune akakosha mabasa, asi vanozogara kwenguva refu kwechinguva vachibhadhariswa.
11-inchers kune rumwe rutivi inowanikwa muhuwandu hwakawanda uye zvakasiyana, kubva kune anodhura Chromebook anotengesa madhora zana nemakumi mashanu, kusvika kumagumo sarudzo dzekumusoro nezvakakwira maficha. Nekudaro, mazhinji epamberi ekupedzisira-anotakurika anowana 150 kusvika 12-inch skrini, uye ndicho chikamu kwaunowana zvakanyanya uye zvirinani sarudzo kana iwe uchida komputa inotaridzika zvakanaka, yakavakwa zvakanaka, inoita nemazvo, inogara kwe13.3 + maawa pakubhadharisa uye haibhadhare ruoko negumbo. Muchokwadi, mazhinji emidziyo inoratidzwa muzvikamu zvakasiyana zveichi posvo inowana 6 kusvika 12-inch screen.
Kana iwe uchida mhanyisa Hardware yekushandisa kwehunyanzvi kana yemitambo, iwe uchafanirwa kukwira kumusoro kune makuru madhizaina. Kune mashoma 14-inchers kunze uko, kunyangwe iyi niche inonyanya kugarwa nesarudzo dzebhizinesi, dzakavakwa zvakaomarara, dzakazara neanotungamira mabhizinesi maficha uye mutengo. 15 uye 17-inchers kune rimwe divi zvinonyanya kutarisana nevatengi venguva dzose, paine chete mashopu mashopu mashoma sekusiiwa.
Kune akawanda akatetepa (pasi pe1-inch) akazara-saizi mabhuku emabhuku kunze uko uye huremu hwavo hwadzikira mumakore apfuura zvakare. Ingo ramba uchifunga kuti zvine simba Hardware uye yakajeka kesi hazviwanzo gadzira vaviri vanofara, uye ita shuwa yekuverenga wongororo kana iwe usiri kuda kupedzisira uine komputa inopisa kwazvo, ine ruzha kana kunyange kuputika pasi pemutoro. .
Kuputira-up chii chakanyanya kunaka ultrabook?
Hapana kana emamwe malaptop akanyorwa pano akakwana, asi kana ukatarisa kumashure kune e-ultra-portables akatangwa mumakore ano apfuura, uchaona zvizvarwa zvazvino zvasvika kure.
Iyo Hardware yakawedzera nekukurumidza uye nekukasira, zvaitarisirwa, asi padivi pakauya nyowani mafomu maficha uye maficha, pamwe nekuvandudza pazvinhu zvese zvinoita kuti laptop ive huru: kuvaka mhando, makhibhodi, mapeti ekubata, skrini, kubatana uye hupenyu hwebhatiri, pakati pavo. Nekuda kweizvozvo, ikozvino kune akawanda akanaka sarudzo dzaungasarudza kubva.
Kana zviri izvo zvakanakisa ultrabook kwauri, ndiko kumagumo kwekuti mumwe nemumwe wenyu imi varume kuverenga iyi positi afunge. Iwe unonyatsoziva zvaunoda kubva palaptop yako uye iwe unoziva zvaunokoshesa zvakanyanya pane chakadai mudziyo. Ndosaka iwe uchifanira kusarudza pakati pemidziyo yese yakanyorwa pano, zvichibva pabhajeti yako uye nematanho emunhu. Ini ndakuudza izvo iwe zvaunofanirwa kuziva nezve ese maabookabooks ayo akakodzera kufunga, asi iyo yekupedzisira sarudzo inogara newe.
Uye kana nemukana chero upi zvawo usati wawana zvawaida mune ino huru posvo, iwe unofanirwa kutarisa aya mamwe mazita akataurwa pazasi:
akanakisa 11.6 inch ultrabooks kana diki ;
akanakisa 14, 15 inch kana makuru maabookabooks uye e Ultra-anotakurika malaptop.
runyorwa rwema ultrabooks aunogona kuwana pasi pe $ 800 (uye mazhinji pasi pemadhora mazana matanhatu);
yemitambo ultrabooks ine yakatsaurwa graphic machipisi (sarudzo dzakanaka dzevagadziri, mainjiniya kana vagadziri vemifananidzo zvakare);
2-in-1 inoshandurwa ultrabooks ine touchscreens;
fanless Ultra mifananidzo - akanyarara zvakakwana, pasina fan kana kutenderera HDD mukati;
akanakisa Chromebook - anodhura mini-malaptop ezveInternet zvakavakirwa zviitiko, zvinotengesa pakati pe $ 150 ne $ 400.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, unogona kutarisa Ongororo dzakatumirwa pano pane ino saiti uye kunyatsoenzanisa kwedu, kana kusiya komendi kana iwe uchida chero rubatsiro nechisarudzo chako, uine chero mibvunzo kana kungoda kuwedzera chimwe chinhu kuchinyorwa chino.
Ramba uchifunga kuti Ndiri kuvandudza rondedzero vhiki mbiri kana matatu, kana zvisingawanzo, kuitira kuti irambe yakachena sezvinobvira. Uye ini ndinotumirawo nhau, wongororo uye magwara pano pane saiti, saka iwe unofanirwa kunyorera kana iwe uchida kugara uchikurukura neazvino matsva uye zvigadzirwa.
Yakanakisa inotakurika yemitambo malaptops uye ultrabooks mu2020 (yakadzama gwara)
Best 30 pamitambo yekutambisa laptops uye ultrabooks mu 2018 (tsanangudzo yakazara)